रुपन्देही बुटवलका जुम्ल्याहा दाजुभाइले आवाजका माध्यमबाट मानिसले जस्तै काम गर्ने रोवर्ट बनाएका छन्। बुटवल योगिकुटी निवासी जुम्ल्यहा दाजभाइ लव र कुश पन्थीले ‘गो गो’ नाम रोवर्ट बनाएका हुन्।
Posted in समाज, सूचना-प्रबिधि
के तपाई सँग हजारको नयाँ नोट छ ? याद गर्नुहोस नक्कली हुन सक्छ, यसरी पत्ता लगाउनुहोस् नक्कली नोट
आज राति हुँदैछ उल्का वर्षा, किन हुन्छ यस्तो ?
यी हुन् नक्कली नोट बनाउने मेसिनसहित पक्राउ परेकाहरु, यसरी बनाउदा रहेछन नक्कली नोट
मेसीको दाहिने हात भाँच्चियो अब तीन साता नखेल्ने